निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु पर्ने १७ कारण - Kamana Khabarनिजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु पर्ने १७ कारण - Kamana Khabar
निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु पर्ने १७ कारण
२५ पुष २०७६, शुक्रबार १६:०० प्रकाशित
७. यो निर्माणस्थलमा सिंगल रनवे विमानस्थल निर्माण गर्दा १५०० हेक्टर जमिन र पछि डवल रनवे बनाउन समेत जोगाड गर्दा तत्काल २५०० हेक्टर जमिनको आवश्यकता पर्दछ । यसो गर्दा अहिले १००० हेक्टर जमिन ९ टागीया बस्ती र वरीपरी करिब – करिब खाली छ । अब १५०० हेक्टर जमिन खाली गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार बढिमा एक लाखको हाराहारीमा मात्र काम लाग्ने रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । डेड लाखको हाराहारीमा साना तिना झाडी बुट्यान र लौराजस्ता समेत गनिएका बोट बिरूवाहरू निर्माण अवधिभरमा काटिने वा खेर जाने सम्भावना हुन्छ ।
९. अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउदा प्राप्त गरिएको जमिनसमेत एक तिहाई मात्र कन्क्रिट निर्माण हुने हो । बाँकी दुई तिहाई एरिया फलफुल बोट बिरुवाले भरिभराउ गरी अनेक थरीका सुन्दर वाटीकाहरू बनाई हराभरा नै बनाउने हो । विमानस्थल निर्माण गर्दा सकभर कम रूख नोक्सान हुने उपाय गर्दा नोक्सानी अत्यन्त न्यून गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा वातावरणीय असन्तुलन हुने सम्भावना कमै हुन्छ । अझ वातावरणीय अनुकुलता हुने वैज्ञानिक उपायहरु अपनाएर विमानस्थललाई सुन्दर र वातावरणलाई अनुकुल बनाउन सकिन्छ ।
१०. जहाँसम्म वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा छ । केही न केही मात्रामा यो कुरा सहि होला । यसले वातावरणमा केही न केही प्रतिकूलता जरूर ल्याउन सक्ला । फेरी पनी देशमा राष्ट्रिय गौरवका ठुला योजना संचालन गर्दा पर्ने साना प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हाम्रै हो । यसमा हामीले त्यसलाई सुरूमै प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाई रहेका छौं । वकैया र पसाहा नदी किनारलाई सुरक्षित गरी लाखौं लाख बिरूवा रोपी हराभरा बनाउने । बारा जिल्लाका बाँकी सबै खाली जमिनलाई हरियाली बनाउने । चुरे अन्तर्गतको खाली क्षेत्रलाई हरियाली बनाउने काम गरेर यस को क्षतिपूर्ति गर्न सक्छौं । यती धेरै सम्भावना र विकल्प हुँदाहुँदै पनी वातावरणको बहानामा एयरपोर्ट निर्माणको विपक्षमा देखिएका पक्षको सोच भने वातावरण बचाउने भन्दा पनी विमानस्थल निर्माण प्रकृया रोक्नेमा केन्द्रीत देखीन्छ ।
१२. यहाँ छलफलको क्रममा स्थानीय पानीको श्रोत र नदीको वहाव रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता पनी देखिएको छ । जुन सर्वथा सहि र न्यायिक पनि हो । यस सन्दर्भमा आयोजनाले विमानस्थल को दक्षिण भागमा सबैतीरको पानी कलेक्सन भएर आउन सक्ने क्यानल डिजाईन गरी रिचार्जको लागी वृहत कृत्रिम ताल बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पानीको श्रोत सुक्न नदिई व्यवस्थित हुने र विमानस्थललाई समेत वातावरणीय रूपले सुन्दर बनाउने छ ।
१६. निजगढ विमानस्थललाई एउटा अध्ययनले दक्षिण एसियाकै ठुलो र चालु विमानस्थल बन्ने तथा ठुलो व्यापार गर्न सक्ने व्यस्त विमानस्थल हुने देखाएको छ । आज युरोप तथा अमेरीकी विमानहरूदक्षिण एशियाको कुनै पनी मुलुकमा उड्न चाही रहेका छैनन । त्यसका कारणहरू ओपन सेक्रेट छन । हामीले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रियस्तरको सुन्दर विमानस्थल बनाउन सफल भयौं भने संसारभरिका विमान निजगढमा आउने छन । दक्षिण एसिया आउने सारा मानिस तथा पर्यटक नेपालमा ओर्लिने छन र नेपालबाटै बाहीर जाने छन । यसले नेपालको पर्यटन र व्यापारमा गुणात्मक फड्को मार्ने छ । यो फड्को के हुनेछ रु कस्तो हुनेछ रु अहिले भन्नु भन्दा पछि हेर्नु उत्तम हुन्छ ।
२५ पुष २०७६, शुक्रबार १६:०० मा प्रकाशित